5 Best-Pirenena Ny Fialan-Tsasatra Any Eoropa Ny Traikefa | Save A Train
Home > Travel Europe > 5 Best-Pirenena Ny Fialan-Tsasatra Any Eoropa Ny Traikefa
Firenena eoropeana tia mankalaza ny andro tsy fiasana ofisialy — indrindra fa ireo izay mahita be dia be mpizaha tany. No mieritreritra hahita ny anankiray amin'ireny firenena nandritra ny fety nasionaly? Raha izany, misy fomba maro mba hanatevin-daharana ny fety!
Ianao koa manana fahafahana tena tsara mba hianatra bebe kokoa momba izany ao amin'ny firenena tantara. Miaina ao an-toerana ny avonavona mety hitarika anao mankasitraka fa ny firenena sy ny olona bebe kokoa. Andeha isika hijery ny 5 best-pirenena ny fialan-tsasatra any Eoropa:
Mpanjakavavy Ofisialy fitsingerenan'ny andro Nahaterahany, fanjakana Mitambatra
Mpanjaka George faha-II dia ny mpanapaka izay nametraka ny fomban-drazana ny fankalazana ny mpanjaka ny fitsingerenan'ny andro nahaterahany ao 1748. Nanomboka tamin'izay, ny Fanjakana Mitambatra dia nankalaza ny fitsingerenan'ny andro nahaterahany ny mpanjaka. Na izany aza, efa niova ny daty fotoana vitsivitsy. Ankehitriny, dia mankalaza Mpanjakavavy Ofisialy fitsingerenan'ny andro Nahaterahany amin'ny asabotsy faharoa ny volana jona. Raha toa ianao ka ao Angletera nandritra izany fotoana izany, mety hahita ny Mpanjakavavy ny fitsingerenan'ny taona nahaterahan'i ny Matso. Ny lanonana dia fantatra ihany koa ho toy ny Trooping ny Loko.
* Ny sary ao amin'ny Bilaogy endri-javatra sary dia ho an'ny Mpanjaka&#8217;s Ofisialy ny Fankalazana ny andro Nahaterahana
Repoblika Andro, Italia
Italiana hankalaza ny fetin'ny Repoblika ny jona 2, izay ny fomban-drazana izy ireo nanomboka tamin'ny 1946. Ny fifidianana izay manohana ny abolishing ny fitondram-panjaka, Ny Italiana dia nanamboatra ny làlana ho an'ny Repoblikan'izy ireo. Na izany aza, dia nifindra ny fankalazana ny daty ny asabotsy voalohany amin'ny volana jona ao 1977. Izy ireo no miahiahy fa ny tany am-boalohany hita taratra daty ratsy eo amin'ny toe-karena. Izy ireo ihany no haverina amin'ny toerany taloha ny daty 2001. Misy be dia be ny fankalazana mba ho vavolombelona manerana an'i Italia tamin'ny fetin'ny Repoblika ny. Ny fahitana mahavariana indrindra dia ny sidina fiarovan'ny tafika an'habakabaka italianina.
Ny Fetim-Pirenena, Soeda
Ny Tokony hankalazana ny fetim-Pirenena tamin'ny faha-6 jona. Tonga ny fotoana mampiravoravo ho an'ny firenena iray manontolo. Izy ireo no nanangana ny Sainam-pirenena ny fankalazana ny Andro any 1916, ary ankehitriny dia andro mahafinaritra sy ny fialam-boly. Misy kaonseritra mozika, fety, sy ny asa isan-karazany dia afaka manatrika. Izany ihany koa ny andro rehefa vaovao Swedes tamin'ny fomba ofisialy ny hahazo ny zom-pirenena. Suède dia manao izay hahazoana antoka fa mahatsapa ny fandraisana ny olona rehetra amin'ny Andron'ny Sainam-pirenena!
Bastille Andro, Frantsa
Rehefa tonga ny frantsay, ny andro-pirenena ny avonavona dia eo amin'ny 14 jolay. Manamarika ny tsingerin-taona ny rehefa nanafika an'i la Bastille. Fa ny zava-dehibe zava-nitranga tamin'ny Revolisiona frantsay amin'ny 1789. Nisy ny matso ho fankalazana izany saika isan-taona satria 1880. Izany&#8217;s mahagaga ny fahitana hahita! Na izany aza, misy be dia be ny hafa fankalazana mba jereo ihany koa. Bastille Andro no fotoana tsara ho any Frantsa, ary tsaratsara kokoa any Paris.
Ny Fetim-Pirenena, Soisa
Soisa ny fetim-Pirenena dia aogositra 1. Izy io dia mankalaza ny andro izay nanaovan'ny Kanto mpanorina telo Soisa miray ao 1291. Ny Soisa handray ny fetim-Pirenena ho zava-dehibe. Iray amin'ny tena zava-mitranga dia miteny avy amin'ny mpitondra fanjakana na ny hafa amin'ireo tomponandraikitra ambony. Misy&#8217;s ihany koa ny matso tao Zurich. Afaka manatrika ny fety tao an-tanàna hafa sy ny tanàn-dehibe ihany koa. Ohatra, Soisa fitiavana ny ambanivohitra fialan-tsasatra teo aloha. Ski resorts ireo iray kilasy voalohany toerana nandritra ny fetim-Pirenena.
- Pirenena fety ao Eoropa dia fotoana lehibe-hianatra bebe kokoa momba ny tantaran ' ny firenena ianao famangiana. Izany ihany koa foana ny andro feno amin'ny hetsika mahafinaritra sy ny matso.
Mikasa ny Fialan-tsasatra any Eoropa amin'ny iray amin'ireo Fety Nasionaly? Boky Ny Fiaran-Dalamby Tapakila ary mankafy!
Tianao ve mba hiraketana ny bilaogy lahatsoratra 5 Best-Pirenena ny fialan-tsasatra any Eoropa teo amin'ny toerana? Azonao atao na ny maka ny sary sy ny soratra, ary hanome voninahitra fotsiny amin'ny rohy amin'ity lahatsoratra bilaogy. Na tsindrio eto: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbest-national-holidays-europe%2F%3Flang%3Dmg- (Horonan-taratasy midina kely ny mahita ny Embed Code)
#HolidayinEurope #fety #nationalholiday #nationalholidays europetravel